Dhuga-baatuun nama waan argee fi dhaga’e himu dha. Nama waan argee fi waan dhaga’e namaa dhoksuu hundmiti keenya ni komana. Namni waan nama miidhu tokko arge himu dhiise badisa ga’uf itti gafatama qaba. Namni waan gaarii tokko arge nama dhoksu immo gaarii sana hirmachu namaa nama hin barbane dha.
MAREE: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte maal goota? Nama sanaf ni lata immo jala dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo naafate fi kkf yoo irra ga’e itti gafatamin sii irra jira lataa?
MEE ITTI YAADII: Qoriicha isa hibbo kee siif hiike, isaa dukkana kee ibse, isaa yello kee sii irra kaase, isaa jireenya siif ta’e nama akkata kee dura sana keessa jiru jala dhoksa jirata immo itti agarsiisa jirta?
Dhamsa kana bakkan ga’uuf humna (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa’ee humna kana maal hubatta?
Halli baratoota Yesus inni 24:36 fi 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal irra argame?
Goofta halla kee geedaru, gadda kee gammachuutti jijiruu ni danda ti isaatti of-gatti. Humna itti halla haama keessa ittin darbitu akka inni siif keenuuf kadhadhu.
“Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis du’aa ka’uuf akka jiru…caafameera.” Waaqayyo woo waan hunduma ni danda’a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?
Waaqayyo namoota akka keenya warra cubbun takalamne, nagaa dhabne, karra irra kanne, ol fi gad joraa ture karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa isa nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina kana labsnun eega itti gafatama keenya.
Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma hundumaa garara ta’e dha. Waamichi keenya dhimma kana bakkan ga’uf ta’u isa dagachuun nuu irra hin jiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya hunduman ol ta’u qaba. Dhimmi keenya hundunuu dhimma garuummaa fi tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra jira. Gaafa dhimmi biran dhufe dhimma kanan ol ta’u barbadu ija keenya gara Gooftatti ol kanfne, waan nu jaamsu barbadu sana iraa faana tokko fudhane, irra faaganne itti yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba’e lafaa lolatti immo dhimma biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu inni itti hin yaadiin xiyyan dinna isa argata. Dhimma keenya isa kaan yoo bakka ga’u dandeenye iyyu, dhimma waamicha keenya isa jaba yoo irranfane nuti namoota gadamuufin irra jiru tana. Dhugumatu “Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee, lubbuu isaa garuu yoo dhabe, bu’aan isaa maali ree?” (Mar 8:36)
REBIRA IFA on January 12, 2017 at 7:56 am said:
REBIRA IFA on January 12, 2017 at 7:55 am said: